Guardiola oo shaaca ka qaaday sababta uu ugu doortay Liverpool inay tahay kooxda ugu adag uu wajahay xifadiisa – Gool FM
Guardiola oo shaaca ka qaaday sababta uu ugu doortay Liverpool inay tahay kooxda ugu adag uu wajahay xifadiisa
Dajiye September 21, 2019
(Manchester) 21 Sebt 2019. Macalinka reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Manchester City ayaa xaqiijiyay in Liverpool ay tahay kooxda ugu adag uu wajahay, xirfadiisa tababarnimo ee kubadda cagta.
Pep Guardiola ayaa maanta ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay maanta ku wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester City iyo Watford horyaalka Premier League, kaasoo ka dhici doono Etihad Stadium.
Guardiola oo ka hadlay dhowr arrimood ee quseeya kooxdiisa ayaa wuxuu sheegay:
“Waxaan sheegay dhowr jeer oo horey, Liverpool waa kooxda ugu fiican uguna adag ee aan wajahay, xirfadeyda tababarka ee kubadda cagta oo dhan”.
“Waxaan sheegay markii aan hogaamineynay iyo markii ay hogaaminayeen, in sababta ay tahay in gabi ahaanba ay heystaan wax walba ee boos kasta ah, weerarka, weerarka khadka dhexe ah, kubaddaha go’an, xawaaraha iyo garoonka Anfield, taasina waa caqabadda ay waajib tahay inaan wajahno”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Manchester City ayaa horyaalka Premier League kaga qaaday Liverpool xilli ciyaareedkii hore kaliya hal dhibic, kaddib markii ay si xoogan ugu dagaalameen laga soo bilaabo bilowgii xilli ciyaareedka ilaa dhamaadka, waxaana la filayaa in markale ay ku celin doonaan xilli ciyaareedkan.
Manchester United oo sii go’aamisay tababaraheeda xiga kaddib Ole Gunnar Solskjær
Kooxda Manchester United oo la kulantay dharbaaxo xoogan kahor kulanka West Ham